Lacagta Cuntada | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Cuntada habka ay u shaqayso / Lacagta Cuntada
2013-2014 Lacagta Cuntada
Qadad Ardayda (Caano ku jiro)
Iskuuladka Hoose $2.45
Iskuuladka Dhaxe $2.70
Iskuuladka Sare $2.75
Laqiimo Jabiyey (Fasalada oo idil) $0.40
Dadka wa wayn $3.50
Quracda Ardayda (Caano ku jiro)
Iskuuladka Hoose $1.35
Iskuuladka Dhaxe $1.40
Iskuuladka Sare $1.50
Laqiimo Jabiyey (Fasalada oo idil) $0.00
Dadka wa wayn $2.25
Hadii aad iska bixinaysid jiso ama payments aad suubinaysid oo aadna ku suubinaysid lacag cad ama check waxad ku qori karta Xarunta xafiiska ku shaqo leh cuntada/District Food Service Office. Markad ciyal badan oo kala dhigta iskuulad kala duwan aad donaysid inad lacag ka bixisid cuntadooda waa in ku soo dirta Xarunta xafiiska ku shaqo leh cuntada/District Food Service Office adigoo ku qoraya order form.
1350 W 106th Street
Checkga waa inad ku qorta ISD #271, adigoo ku daraysid cunugada magaca sadaxan.
Lacag cadan ah
Lacag cadan ah hadii aad soo diraysid ku rid bashqad kuna qor cunuga magacisa iyo ciwanka guriga. Cunuga hadii uu lacag wato wuxuu gadan kara xiliga cuntada. Iskuuladka hoose waa inad lacagta sii bixisa intusan iskuulka bilawan. Waxaan kugu gubabinayna inad lacagta cuntada ee cunugada aad horey u siibixisid.
Cuntada oo aad ku jisodeda/payments ku bixinaysid Credit Card adigoo u maraya PayPams
Jisoda/payments waxad ku bixin karta Credit card payments (VISA, Discover or Mastercard) adiga oo aadaya www.paypams.com. Jisoda oo la bixiyo 9:00 subixii waxay ku dhacda ardayga kaydiyahiisa lacagta isla maalintas. PayPams waa meel ay si fudud oo lahuba ay kala soconkaran walidinta/ilaliyasha. Paypams waxad ka heli karta.
Prepay ayad istic mali karta adigoo online ka’eegaya cunugada cuntadisa
Online ka’eeg cunugada inta ugu harsan kayskisa/account lacagta
Malin walba ayad fiirin karta habka uu cunugada u isticmalo keydiyahiisa/account
Ka’eeg online jisada/payment
Waqti go’an u suubi jisoda/payments
Email ku darso si durbo lagula soo socodsiyo wixii ka jira kaydka lacagta.
Waxad suubsata wax layirahdo balance-triggered si isla markiba lagugu so diro aqbar dag dag ah oo ah jiso/payments aad bixisay
Waxad wax ku gadan karta VISA, Discover, Mastercard ama debits cards.
Hadii aad donaysid inad lacagta u bixiso electronically, walidinta waxay u bahan yihin inay suub sadan PayPams. Xususnow hadii aad donaysid in aad check soo dirtid aad ku soo diri kartid meesha laga xukumo.
Hadii aad rabtid inad ogatid sida la isku qoro, aad www.paypams.com. La soo xiriir Xafiiska ku Shaqo leh Cuntada/Food Service Office hadii aad wax su’aal ah qabtid 952-681-6570.
Aqbarta ku saabsan wixii kugu haray/Balance
Caruurta way waydiisan karan inta ugu hartay kaydkooda inta ay lineka ku jiran markay cuntada qaadanayan. Hadad soo wacdo Xarunta ku shaqoleh cuntada xafiiskoda /District Food Service office waxa laguu shagaya inta kugu harsan kaydka, kana soo wac 952-681-6570 laga bilawo 7:30 a.m. ila iyo 4:15 p.m. ama iska diiwan gali/register PayPams www.paypams.com.
Wixii ugu horay cunugada kaydiyihisa sanadkii lasoo dhafay waxa loo soo gudbina sanadka bilawanaya, xataa haduu cunuga bilawo iskuul cusub ama uu galo fasal cusub. Hadii adiga wax lagugu lahana waxa laga goosanaya jisoda/payment aad markas suubisid. Majirto wax lacag ahan ee la isugu soo celiyo ama iskuulka uu kuso calinayo. Wixii lacag ah ee kaydka kuugu haray waxad waydisan karta laga bilawo bisha lixad Xarunta ku shaqo leh cuntada xafiiskoda/District Food Service office. Ardayda sanadkas ka qalin jabinaya iskuulka waxay kuwa kushiinka waydisan karan lacagta ugu hartay keydkooda hadaysan ka badnayn $10. Lacagtii kaydka/account looga tago waxa loo gudbina ilmaha la dhashay kaydiyahoda/account.